I-LIID: I-CRM ekrelekrele yokuNgena kwi-SmartPhone yakho | Martech Zone
Abathengisi bayaziwa ngokungadibanisi imisebenzi kwiCRM yenkampani. Umsebenzi wokuloga kwenqanaba unokuba sezantsi njenge-20%, ekhokelela kuqikelelo lwentengiso olwenziwe ngokusekwe kuloo datha ukuba icinywe ngama-80%. IQELA Ukujongana nale ngxaki ngesicelo se-smartphone esinika ukuphinda kungene idatha ngokuzenzekelayo kunye nezixhobo zokwenza ubomi bube lula njengokukhangelwa kwekhadi leshishini kunye namanqaku entetho-ukuya-kwitekisi.
The IQELA usetyenziso lweselfowuni lukwasebenza njengomncedisi wentengiso, ekhumbuza ukuphinda kulandelwe emva kwentlanganiso kwaye ugcine unxibelelana nazo zonke iimeko eziqhubekayo.
Isicelo yiCRM-agnostic, ngoku iyayixhasa lesforce kwaye IMicrosoft Dynamics kunye nokunye okulandelayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, isimahla ukuyisebenzisa kubathengisi ababini bokuqala kwintlangano yakho! Abathengisi banokukhuphela i-iOS okanye usetyenziso lwe-Android kwaye basete uqhagamshelo kwiCRM zabo ngokwabo.
Khuphela i-LIID ye-iPhone Khuphela i-LIID ye-Android
tags: ukungena kwemisebenziusetyenziso lwe-androidCRMIphone appIQELAukungenaIMicrosoft Dynamicsusetyenziso lweselulaizicelo zeselulaukuthengisa